आइटी अडिट गर्दैनन् नेपाली बैंक,अनि किन नहोस् त फ्रड! बैंककै असावधानीले चोरिन्छ पैसा
प्रकाशित मिति: Dec 1, 2016 3:04 PM | १६ मंसिर २०७३
आइडी अडिटका बिभिन्न स्वरुप हुन्छन्। ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित एवं बैङ्कको समग्र सुरक्षा जाँच हेर्न 'आइएसओ २७००१' गरिन्छ। साथै कार्डमा कुन किसिमले डाटा राख्ने भनेर पेमेन्ट कार्ड स्टडी गर्ने प्रचलन छ। डाटा सेक्युरिटी स्टान्डर्ड (पिसिआइडिएसएस) र मोवाइल तथा इन्टरनेट बैङ्किङको सर्टिफिकेसनका लागि प्रोटेक्सन एण्ड एड्भोकेसी फर बेनिफिसियरिज् अफ सोसियल सेक्युरिट (पिएविएसएस) को मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपालका बैंकहरुले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित यिनै जाँच नगर्दा बिभिन्न समस्या बल्झिने गरेको स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजीका चिफ टेक्नोलोजी अफिसर समिर बज्राचार्यले बताए।
दक्ष जनशक्ति नभएका कारण नेपाली बैङ्कहरुले 'आइएसओ २७००१' स्टान्डर्डको अडिट गर्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘यो अडिट आफैंमा महङ्गो पर्छ, उनले भने- त्यसमा पनि नेपालमा जनशक्ति छैनन्। त्यसैले बैंकले चाहेर पनि आइटी अडिट गर्न सकेका छैनन्।’
नेपालमा बैंकहरुमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड, नविल, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्टले पिसिआइविएसएस र पिएविएसएसको जाँच गराउँदै आएका छन्। यस बर्षदेखि एनएमबी बैङ्कले पनि यी सुरक्षा जाँच थालेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले बताए। तर, दक्ष विशेषज्ञ अभावका कारण नेपालका कुनै पनि बैङ्कले 'आइएसओ २७००१' स्टान्डर्ड पुरा गर्न सकेका छैनन्।
एफवान सफ्टका सिइओ सुवास शर्मा नेपाली बैङ्कहरुसँग पैसा निकालिसकेपछिको सूचना 'अलर्ट सिस्टम'मात्र रहेको बताउँछन्। ह्याकरले चोरी गर्नु अगावै सूचना थाहा पाउने प्रविधि बैंकमा रहुन पर्ने उनको भनाइ छ।
आइटी अडिट गर्दैनन् नेपाली बैंक,अनि किन नहोस् त फ्रड! बैंककै असावधानीले चोरिन्छ पैसा को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।